China Dual ရည်ရွယ်ချက်လိမ်ဖဲ့ခြင်း၊ ratchet dual-ရည်ရွယ်ချက်လိမ်ဖဲ့ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ဦး ခေါင်း၌ပွတ်သပ်လိမ်ဖဲ့ခြင်း၊ နှစ်ပွင့်ခြင်းလိမ်ဖဲ့ခြင်း၊ box wrench၊ Boda
နှစ်မျိုးရည်ရွယ်သည့်လိမ်ဖဲ့ခြင်း, ratchet dual-ရည်ရွယ်ချက်လိမ်ဖဲ့ခြင်း, ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ဦး ခေါင်း၌ပွတ်သပ်လိမ်ဖဲ့ခြင်း, နှစ်ပွင့်လင်းလိမ်ဖဲ့ခြင်း, box ကိုလိမ်ဖဲ့ခြင်း, ချိန်ညှိလိမ်ဖဲ့ခြင်း
spanner အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း -
Spanners များအားအခြေခံအားဖြင့်သေနေသော Wrench နှင့် Live Wrench ဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားသည်။ ယခင်သည်ပုံသေနံပါတ်ပါသောလိမ်ဖဲ့ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
၁။ Solid spanner: အဆုံးတစ်ခု (သို့) နှစ်ဖက်စလုံးကိုအရွယ်အစားအခွံမာသီးများ (သို့) အချို့သောသော့ခလောက်များကိုဝက်ဆိုက်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ fixed size ဖွင့်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
၂။ Box spanner: အဆုံးသတ်နှစ်ခုစလုံးဟာ hexagonal အပေါက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ထောင့်တစ်ထောင့်အပေါက် ၁၂ ခုရှိပြီးအဆုံးကျဉ်းကျဉ်းသောနေရာများအတွက်သင့်လျော်ပြီး၊ ပုံမှန်လိမ်ဖဲ့ခြင်းအခါသမယကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။
၃။ Dual ရည်ရွယ်ချက်လိမ်ဖဲ့ခြင်း - အဆုံးတစ်ခုသည်တစ်ခုတည်းသောအစိုင်အခဲ spanner နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ခုသည် ring spanner နှင့်အတူတူဖြစ်ပြီးသတ်မှတ်ချက်တူသော bolts or nuts နှစ်ခုလုံးကိုအဆုံးသတ်ထားသည်။
4. Adjustable spanner: အဖွင့်အကျယ်ကိုအရွယ်အစားအတိုင်းအတာအတွင်းချိန်ညှိနိုင်သည်။ အဆိုပါလိမ်ဖဲ့ခြင်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များမှာခိုင်ခံ့သောမေးရိုးများကိုအံသွားများပါသောပြားချပ်ချပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ရွေ့လျားနိုင်သောမေးရိုး၏အဆုံးတစ်ခုသည်ပြားချပ်ချပ်ရှိသောမေးရိုးတစ်ခုသို့ပြုလုပ်ထားသည်။ အခြားတစ်ဖက်ကိုအံသွားနှင့်ပြည့်စုံသည့်ခုံတစ်ခုအဖြစ်ပြုလုပ်ထားသည်။ တီကောင်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ရွေ့လျားနိုင်သောမေးရိုးများကိုလျင်မြန်စွာဖယ်ရှားနိုင်ပြီးမေးရိုး၏အနေအထားကိုလည်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။
5. Hook spanner - ကန့်လန့်ကာအခွံမာသီးအထူကိုလှည့်ရန်လခြမ်းလိမ်ဖဲ့ခြင်းဟုလည်းလူသိများသည်။
၆။ Socket wrench - ၎င်းသည်ရှီဂံဂန် (သို့) အပေါက် (၁၂) ခုပါသောအမျိုးမျိုးသော socket များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးလက်ကိုင်၊ extension rod နှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကျဉ်းသောဝက်အူအနေအထားသို့မဟုတ်နက်ရှိုင်းသောစိတ်ဓာတ်ကျမှုများရှိသည့်သော့များသို့မဟုတ်အခွံမာသီးများအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။
(၇) Hexagon Wrench - အထူးသဖြင့် Hexagon screws များလှည့်ရာတွင်အသုံးပြုသော L-shaped hexagon bar wrench ။ Hexagon လိမ်ဖဲ့ခြင်း၏ပုံစံသည်ဆx္ဌဂံဆန့်ကျင်ဘက်၏အရွယ်အစားကိုအခြေခံထားကာမူလီအရွယ်အစားသည်နိုင်ငံတော်အဆင့်ရှိသည်။ ရည်ရွယ်ချက် - စက်ကိရိယာများ၊ မော်တော်ယာဉ်များနှင့်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများတွင်အခွံမာသီးများပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖယ်ရှားရန် (သို့) ဖျက်ရန်အတွက်အထူးအသုံးပြုသည်။
(၈) Torque wrench: ကမူလီ (သို့) ခွံမာသီးနေချိန်မှာအသုံးပြုထားတဲ့ torque ကိုပြသနိုင်တယ်။ သို့မဟုတ်အသုံးပြုသော torque သည်သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးသို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်အလင်းသို့မဟုတ်အသံအချက်ပြမှုကိုပေးပို့လိမ့်မည်။ torque လိမ်ဖဲ့ခြင်းအားသတ်မှတ်ထားသော torque ဖြင့်တပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုသည်။
ပေါင်းစပ်သောလိမ်ဖဲ့ခြင်းအသုံးပြုခြင်း - ကြီးမားသောစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးရည်ရွယ်သည့်လိမ်ဖဲ့ခြင်းသည်ရေနံ၊ ဓာတု၊ သတ္တုဓာတ်၊ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရေနံသန့်စင်ခြင်း၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေနံဓာတုနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်သင့်တော်သည်။ ၎င်းသည်ပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Dual ရည်ရွယ်ချက် Wrench ကိုမက်ထရစ်စနစ်နှင့်အင်္ဂလိပ်စနစ်တို့ခွဲခြားထားသည်။ Dual-ရည်ရွယ်ချက်လိမ်ဖဲ့ခြင်း / ပေါင်းစပ်သည့်လိမ်ဖဲ့ခြင်း၏ပစ္စည်း။ dual-purpose wrench ကိုအလတ်စားကာဗွန်သံမဏိ ၄၅ သို့မဟုတ် 40Cr သတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ dual-ရည်ရွယ်ချက်လိမ်ဖဲ့ခြင်း၏ထုတ်လုပ်မှုစံ: GB / t4392-1995 (ဒေသန္တရအစိုင်အခဲလိမ်ဖဲ့ခြင်းနှင့်ဒေသန္တရ box လိမ်ဖဲ့ခြင်း) ။ dual-purpose လိမ်ဖဲ့ခြင်း၏အင်္ဂါရပ်များ - dual-ရည်ရွယ်ချက်လိမ်ဖဲ့ခြင်း / ပေါင်းစပ်သည့်အလိမ်ဖဲ့အရည်အသွေးသည်အလတ်စားကာဗွန်သံမဏိသို့မဟုတ်အရည်အသွေးမြင့်အလွိုင်းသံမဏိမှပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်း၊ တည်ငြိမ်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ မြင့်မားသောပစ္စည်းသိပ်သည်းဆ၊ ခိုင်ခံ့သောသက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်မရှိ၊ ခေါက်ထားခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ခြင်း၊ ကွေးခြင်းမရှိခြင်း၊
1. ခရိုမီယမ်ဗန်နာဒီယမ်သံမဏိ - သံမဏိ၌အရည်အသွေးပိုကောင်းသောဓာတုဗေဒသင်္ကေတ CR-V ။
2. ကာဗွန်သံမဏိ: အရည်အသွေးယေဘုယျဖြစ်ပြီး, စျေးကွက်အများအပြားရှိပါတယ်။
spanners အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ ပုံသေ wrench နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် wrench ရှိသည်။ ယခင်သည်ပုံသေနံပါတ်ဖြင့်ရေးသားထားသောလိမ်ဖဲ့ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထို့အပြင်အစိုင်အခဲလိမ်ဖဲ့ခြင်းဟုလည်းခေါ်သည်။
ရွေ့လျားသောလိမ်ဖဲ့ခြင်း၏အဖွင့်အကျယ်ကိုသတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေးအတွင်းချိန်ညှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များအခွံမာသီးများနှင့်သော့ခလောက်များကိုဆွဲ။ လျှော့ချရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ချိန်ညှိနိုင်သည့်လိမ်ဖဲ့ခြင်းတွင် ဦး ခေါင်းနှင့်လက်ကိုင်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးခေါင်းကိုရွေ့လျားနိုင်သောပြား၊ ခိုင်မာသောနှုတ်ခမ်း၊ ပါးစပ်ပြား၊ တာဘိုင်နှင့်ရိုးတံတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အစိုင်အခဲလိမ်ဖဲ့ခြင်းဟုလည်းလူသိများသောသေနတ်ကောင်သည်အဓိကအားဖြင့်ခေါင်းနှစ်လုံးပါသောအစိုင်အခဲလိမ်ဖဲ့ခြင်းနှင့်ခေါင်းတစ်လုံးတည်းသောအစိုင်အခဲလိမ်ဖဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အဓိကအားဖြင့်စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အိမ်အလှဆင်ခြင်း၊ ကားပြုပြင်ခြင်းနှင့်အခြားအမျိုးအစားများတွင်လုပ်ဆောင်သည်။ နှစ်လုံးခေါင်းအစိုင်အခဲလိမ်ဖဲ့ခြင်းသည်အထွေထွေကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်ကိရိယာများသို့မဟုတ်အပိုပစ္စည်းများတပ်ဆင်ရန်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်လိုအပ်သည်။
ရှေ့သို့ သစ်သားဖြင့်လုပ်သောဓါး၊ အလူမီနီယမ်လွှ၊ ဓါး၊
နောက်တစ်ခု: Hexagon လိမ်ဖဲ့ခြင်း, ပြားချပ်ချပ်ခေါင်းဆx္ဌဂံလိမ်ဖဲ့ခြင်း, box ကို hexagon လိမ်ဖဲ့ခြင်း, ဘောလုံးအမျိုးအစား hexagon လိမ်ဖဲ့ခြင်း
ဆx္ဌဂံလိမ်ဖဲ့ခြင်း, ပြားချပ်ချပ်ခေါင်းဆagon္ဌဂံလိမ်ဖဲ့ခြင်း, box ကို h ...
ကတ်ကြေး, PVC ကတ်ကြေး, PVC ရှုး, ရေပိုက် ...
သံမဏိဖိုင်ကိရိယာများ၊ သံမဏိဖိုင်၊ မာကြောသောသံမဏိပစ္စည်းများ ...
ခြစ်ရာ, putty ဓါး, သစ်သားလက်ကိုင်, ပလပ်စတစ်ဟက်တာ ...
အဆင့်၊ သံလိုက်အဆင့်၊ အလူမီနီယမ်အဆင့်၊ အလွိုင်း lev ...